ရန်ကုန်မြို့ရှိ မာလရှမ်းကော ဆိုင်များစုစည်းမှု 4041 views
အခုနောက်ပိုင်းလူကြိုက်များတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာ မာလရှမ်းကော ဆိုတာလည်းတစ်မျိုးပေါ်ထွက်လို့လာပါ တယ်။ သူကိုရိုးရိုးတန်းတန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ မာလာဟင်းပေါ့…. တချို့လူတွေကအဲ့ဒီလိုခေါ်နေကြပေမယ့် ဒီမာလရှမ်းကောက မာလာဟင်းနဲ့ပုံစံတူနိုင်ပေမယ့် အရသာနဲ့ ပါဝင်တာတွေမတူပါဖူး။ မာလရှမ်းကော ကိုပြုလုပ်တဲ့ပုံစံမှာ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်တာကအစကွဲပြားပါတယ်။ ဒီလိုပါဝင်ပစ္စည်းတွေရွေးချယ်တဲ့ အခါမှာလည်း စားသုံးသူတွေကမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ထည့်စားလို့ရသလို အရသာကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်နိုင်တဲ့ အတွက် ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျပြီး အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟင်းပွဲတစ်ပွဲကိုရရှိမှာပါ…
မာလရှမ်းကောဆိုင်တွေမှာ စားသုံးသူတွေက လူငယ်တွေအပြင်၊ လူလတ်ပိုင်းနဲ့ လူကြီးပိုင်းအရွယ်တွေပါ တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ အရွယ်မရွေးစားသုံးကြတယ်ပေါ့… ဒီမှာဆိုရင် အခြောက်(အသုပ်)ပုံစံနဲ့လည်းရသလို အရည်နဲ့လည်းစားနိုင်တယ်။ အစပ် Level ကိုလည်းကိုယ်ကြိုက်သလိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခု… အထုံ။ အဲ့ဒါကိုပိုပြီးသတိထားစေချင်တယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ပူပူထုံထုံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ထည့်ခိုင်းတာကိစ္စမရှိပေမယ့် အဲ့ဒီလိုအရသာပူပူထုံထုံကိုမကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ကြိုပြီးရှောင်ခိုင်းသင့် ပါတယ်။ ပုံမှန်ဘာမှမပြောရင်တော့ဆိုင်ကအထုံထည့်ပြီးချက်ပေးလိုက်မှာပေါ့…. ((မာလရှမ်းကော စားပြီး သိပ်မကြိုက်ဖူးလို့ပြောကြတဲ့အထဲမှာလည်းဒီအကြောင်းကြောင့်လည်းပါတယ်၊ အချို့ကျတော့လည်း ကိုယ့်ဘက်က သတိမထားမိတာမျိုး၊ မေ့သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ အထုံလျှော့ပါ/ရှောင်ပါဆိုတာမပြောလိုက်ရင် ဆိုင်ကတော့ထည့်လိုက်မှာပဲ… အဲ့ဒီအခါကိုယ်ကစားလိုက်လို့ပူထုံသွားရင် ဟင်…ဘလိုကြီးလည်း၊ ဒါကြီးမကြိုက်ဖူးဆိုပြီးဖြစ်သွားတတ်လို့ပါ))
မာလရှမ်းကောရဲ့အရသာကတော့ပုံမှန်အားဖြင့် ပူပူစပ်စပ်၊ ရှူးရှူးရှဲရှဲလေးနဲ့စားလို့ကောင်း၊ အနံ့လည်းမွှေးလို့ လူကြိုက်များတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် သူတို့ကယူတဲ့အလေးချိန်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ အသီးအရွက်၊ အသားငါး၊ ပင်လယ်စာနဲ့ အခြားမှိုတွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအမျိုးအစားခွဲပြီး 100gm ဆိုရင်ဘယ်လောက်စသည်ဖြင့်ကျသင့်တာမို့ ယူတဲ့နေရာမှာတော့ နဲံနဲလေးချိန်ဆပြီးယူမယ်ဆိုရင် အများကြီးတော့မကျဖူးပေါ့နော်….
မာလရှမ်းကောကြိုက်တဲ့ MyLann ရဲ့ ကိုကို၊မမတွေအတွက် မာလရှမ်းကော ရနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးရဲ့ လိပ်စာလေးတွေကို စုစည်းပေးထားပါတယ်…. အားလုံးအသုံးဝင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်…
*** The Spicy House
B1-04, Hledan Center, Kamaryut Township, Yangon.
3rd Flood, Junction Maw Tin, L
anmadaw Township, Yangon.
6.5Mile, Market Place by City Mart, Mayangone Township, Yangon.
*** Chilli Pot
No-23, Nawaday Street, Yaw Min Gyi Ward, Dagon Township, Yangon.
*** Worker Worker
No.9D, Waizayandar Road, Near CB Bank/ Opposite Side of Eldorado. (Corner of Waizayandar Road & Lay Daunt Kan Road).
*** Savory Seafood & Mala Cuisine
Kandaw Gyi, Mhaw Sin Island, Bahan Township, Yangon.
*** Kaung Kaung Malar Shan Kaw Restaurant
3rd Floor, Myanmar Plaza, Kabar Aye Pagoda Road.
*** Hungry Bird Dim Sum & Mala Cuisine
No.158, Thit Sar Road, Yankin Township, Yangon.
#MyLann #Online_Restaurant_Directory #Online_Food_Guide #Food_Review_in_Yangon #Foodie_Myanmar #Foodie #Mala_Shan_Kaw #MaLa_Cuisine